A GA-ARỤ ỌNỤ ỤZỌ ÁMÁ MAKA ỌRỊA KORO N’ÓKÈALA EBỌNYỊ/ENUGWU – ỤMAHỊ – hoo!haa!!
A GA-ARỤ ỌNỤ ỤZỌ ÁMÁ MAKA ỌRỊA KORO N’ÓKÈALA EBỌNYỊ/ENUGWU – ỤMAHỊ
Abakaliki – Gọvanọ Devid Ụmahị nke Ebọnyi Steeti nọrọ ụnyahụ were kwuo na ya ogbo ya nke Enugwu Steeti, Ifeanyị Ugwuanyi, ekpebiela ịrụ ọnụ ụzọ ámá n’okeala ha iji hụ -na ndị njem anaghị agafe maka mgbochi ọrịa koro.
Ụmahị kwupụtara nkea n’okwu ọ gwara ndị Steeti ahụ nile banyere mbọ gọọmenti iji kwụsị ọrịa koro.
Kaosiladi, ọtụtụ mmadụ hụtara nkea dịka mmadụ ire nkịta ga zụrụ enwe maka na sọọsọ ihe ga-azọpụta Ndigbo n’ọrụ nchekwa, ma ọ bụ nchekwa ókèala ọrịa koro, ma ọ bụ nchekwa obodo n’uju bụ ihe ótù nchekwa (Amotekun) Ndigbo.
Chetakwa na tupu nsogbu ọrịa koro, Umahi kwere Sinetọ Jim Nwobodo, Ichie Ọchịchị, nkwa na ndị Gọvanọ Mpaghara Ọwụwa Anyanwụ ga-amalite ótù nchekwa nke Ndigbo n’ọnwa Eprel afọ 2020.
Gọvanọ ahụ kwuru sị, “Mụ na Gọvanọ Enugwu Steeti kparịtara ụka were kpebie ịrụkọta ọnụ ụzọ ámá, nke ga-abụ a kpọchie ya, anyị alakpuo. Anyị ga-arụ ya n’udiri ga-abụ onye sigodu ime ọhịa, ị gaghị agahienwu.
” A ga m ewepụtara atụmatụ mkpọchi ókèala a anya. Ọ bụrụ na e sibu etu ahụ eme ya, Ebọnyi agaghị ọrịa koro ọbụla chaa chaa”
Umahi kwukwara na ya na ndị ka na-ekwu na ighọrịa koro adịghị kwesịrị imere ọmaiko.
“Ndị ka na-ekwu na ọrịa kọrọ adịghị, na ọ bụ ihe e ji eme ihe ndọrọndọrọ ọchịchị kwesịrị ọmaiko.
” Gịnị mere unu agaghị abịa n’ogige nlekọta ọrịa koro were makụọ ndị nwere ọrịa a, karịa ịnọ na Facebook akọ akụkọ”
Hmm, ọ dịkwa egwu. Ọnụ Ụzọ Ámá ha na – achọ ịrụ ọ bụ nke Trump?
Ọzọkwa, ndị nchekwa ga-anọkwa na-elekọta ya bụ ọnụ ụzọ ámá, ọ kwa ndị Uwe Ojii na ndị ọrụ nchekwa ọzọ nke nọ n’okpuru ndị Fulani?
Previous Post: ỌRỊA KORO EGBUOLA NWANYỊ AMERỊKA BỊARA ỊHỤ IKO YA NA WỌRỊ
Next Post: A NWUCHIKỌỌLA ỤMỤ NWANNE NWANYỊ ABỤỌ NDỊ MBA NIGER NDỊ ONYEISI NDỊ EKPERIME ZAMFARA NA-EDINAKỌ